Ọrụ | Li Tim-Oi Foundation
on 24th Jenụwarị 2004 akara ngosi nke Revd Dr Florence Li Tim-Oi raara onwe ya nye na St Martin-in-the-Fields, London. Onye Revd Dr Ellen Francis Poisson, Order of St Helena, New York, de ya. Enwere ike ileta akara ngosi a na Dick Sheppard Chapel dị n'okpuru ụlọ St Martin na Trafalgar Square, London.
Site na akara ngosi site na aka ekpe gaa n'aka ekpe: Revd Nicholas Holtam, mgbe ahụ Vicar nke St Martin-in-Fields, ugbu a bụ Bishọp nke Salisbury, onye nyefere akara ngosi ahụ, na-eyi ahụmịhe e mere maka Bishop RO Hall onye chiri Li Tim-Oi na 1944; Revd Dr Ellen Francis OSH onye dere akara ngosi ahụ; Canon Ruth Wintle, onye bụzi oche Li Tim-Oi Foundation, onye na-elekọta ebe ncheta ụka, na-eyi akwa cha cha nke si Zimbabwe; Canon Christopher Hall, odeakwụkwọ na onye guzobere Foundation na nwa Bishop RO Hall. Canon Christopher kwusara ozi ahụ, okwuchukwu ya na-ewere ụdị nke Akwụkwọ Ozi nye Florence Li Tim-Oi.
Enwere ike ibudata ihe ofufe eji eme ihe n'oge a:
Ihe omuma banyere Revd Dr Florence Li Tim-Oi na Bishop RO Hall
Ihe ndị a dị : agụ or download mpempe pdf.
'Ọ Na-ewe Otu Nwanyị'
Akwukwo akwukwo gosiputara nke oma 8 gosiputara banyere Revd Dr Florence Li Tim-Oi, di site na iziga Envelopu Cuban Addrated St5 na Flint House, Selmeston, BN26 6UD ma obu inwe ike gụọ ya or budata otu ebe a
'Laghachi na Hepu'
Akụkọ Li Tim-Oi dị ka Revd Dr Bob Browne sere site na nloghachi na China ya na Tim-Oi na nwanne ya nwanyị na 1980. versiondị dakọtara na US sitere na Episcopal Media Center ma ọ bụ chọọ web maka Video Libraries.
'Oké Ihe Mkpebi nke Ndụ M'
Ihe ncheta nke Florence Li Tim-Oi na bekee [Anglican Book Center, Toronto 1996 - 128pp - ISBN 1 55126 128 6]. Ọzọkwa dị na Chinese [ISBN 962-7149-96-9], na mbipụta ọhụrụ Hong Kong [ISBN 978-962-488-549-1].
'Nwanyị A Hụrụ n'Anya nke Ukwuu'
Florence Li Tim-Oi ya na Ted Harrison [DLT paperback 1985 - 118pp - ISBN 0 232 51632 4].
'RO - Ndụ & Oge nke Halllọ Nzukọ Bishop nke Hong Kong'
David M Paton [Hardback 1985 - 332pp ISBN 0951085107], gbara £ 35, tinyere ụgwọ nzipu ozi maka 1kg. Mpempe ole na ole ka dị site na The Knowle, Deddington, Banbury OX15 0TB. A ga-enye ego maka ego niile n'aka Li Tim-Oi Foundation.
'Borne na nku nku - okwukwe na abụ nke Li Tim-Oi'
St Martin's Houston, DVD @ £ 5 biputere n'efu - dị dị n'elu.
vidiyo nke Revd Dr Bob Browne dere banyere ihe banyere ndị maara Li Tim-Oi.
'Nnu na Ìhè'
bụ akụkọ na-akpali akpali banyere ọrụ nke Foundation ahụ dabere na nleta Christina Rees na 2003 na ụfọdụ n'ime ụmụ nwanyị Li Li-Oi na East Africa. Budata otu.
Ifuru maka Florence
Na 2007, BBC Radio 4 Sunday Programme malitere asọmpi maka ịkpọ Dahlia ọhụụ emepụtara ugbu a. Onye na-ege ntị ma nweekwa nkwado siri ike na ntuli aka ndị nwanyị, Oriakụ Marion Simpson dere n'akwụkwọ iji kwuo ka akpọọ ifuru 'Florence Li Tim-Oi'. Ọ gbara ndị enyi ya niile ume ịgbasa okwu ahụ ma degara ya na BBC. A họọrọ 'Florence' dị ka aha gọọmenti ọhụrụ nke dahlia.
Ntọala ahụ jụrụ Rt Rev Barry Rogerson, onye dịka Bishọp nke Bristol chiri ụmụ nwanyị mbụ dịka ndị ụkọchukwu na Churchka England na 12th Machị, 1994, iji gọzie Dahlia:
Na mmemme ịkpọsa ifuru, gọọmentị Bishop Barry kwuru, Dika ozuzu ozuzu, nna m gaara enwe obi uto n’oge a, n’agbanyeghi na okacha amara bu carn. Bryn Bowles nke West Harptree Nursery agbasawo dahlia ọhụrụ a mara mma, yana dịka ọchịchọ nke ndị na-ege ntị na BBC Sunday Program, a na-akpọ ya aha Florence Li Tim-Oi iji mee otu narị afọ ọmụmụ ya. Florence Li Tim-Oi bụ nwanyị mbụ na Oriri Nsọ Anglican e chiri echichi. N’ụbọchị ọjọọ nke Agha Worldwa nke Abụọ, mgbe Anglịkan Church dị na Macau enweghị ụkọchukwu, Bishọp RO Hall họpụtara ya.
Maka ọtụtụ ndị njem njem ogologo oge ichi ụmụ nwanyị dịka ndị ụkọchukwu na Chọọchị England, ọ bụ ọkụ na njedebe nke ọwara. Mgbe ọ nwụsịrị, e guzobere Li Tim-Oi Foundation iji kwado ụmụ nwanyị nọ na World nke Abụọ, ndị nwere obere ego na-eme mgbanwe dị ukwuu ma dị ukwuu maka ọdịmma n'obodo ha. Folliott Sandford Pierpoint, onye nwụrụ mgbe Florence dị afọ iri, dere ukwe ahụ 'Maka ịma mma nke ụwa' ebe ị ga - ahụ ahịrị ndị a: 'Maka onyinye ọ bụla zuru oke nke gị, maka agbụrụ anyị nke enyere n'efu, nye mmadụ na Chukwu, okooko osisi nke ụwa na akụrụngwa nke eluigwe, 'nke na-achịkọta ihe omume a. Mma nke ifuru a bụ ncheta nke ịdị mma nke ndụ Florence na ndị na-agbaso nzọụkwụ ya - akụrụngwa nke eluigwe.
Bishọp Barry kpere ekpere,
“Nna anyị na-enye gị ekele maka ịma mma nke ihe okike gị nke ị na-ekwe ka amamịghe mmadụ kwalite. Anyị na-akpọ nke a Dahlia Florence Li Tim-Oi, na ncheta nke otu ohu gị nke duziri ụzọ ka ọtụtụ wee soro, maka nnukwu uru chọọchị gị na obodo gị gburugburu ụwa. Ngọzi, O Onye-nwe, onyinye a, na site na ya a ga-enwe ike ịlọghachi ncheta Florence ma gbasoo ihe nlereanya ya. Na aha nke Nna, na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. ”
Foto a gosipụtara Rita Lee-Chui, na-ejide ezigbo ifuru nke aha ya bụ nsọpụrụ nwanne ya nwanyị.
Ole na ole nke tubers Li Tim-Oi dị maka £ 10 - a ga-akwụnye ya na 'Li Tim-Oi Foundation'. Kpọtụrụ Stephanie Lewis-Gray na admin@ltof.org.uk ma ọ bụ degara Onye isi odeakwụkwọ, Flint House Selmeston BN26 6UD.